MUNYIKA yose Zvapupu zvaJehovha zvinonyatsozivikanwa kuti hazvipindiri mune zvematongerwo enyika uye muhondo dzinorwiwa munyika dzakasiyana-siyana. Vanotenda zvakasimba kuti vanofanira ku“pfura mapakatwa avo kuti ave miromo yemagejo” uye kuti ‘havafaniri kudzidza kurwa.’ (Isaya 2:4) Havatsoropodzi vaya vanenge vasarudza kupinda muchiuto. Ko kana hana yemumwe weZvapupu zvaJehovha ichimurambidza kupinda muchiuto asi mutemo womunyika yake uchiti anofanira kuita izvozvo? Iyi ndiyo nyaya yakasangana nomumwe murume wechiduku anonzi Vahan Bayatyan.
Zvakafamba Sei Kuti Nyaya Yacho Iendeswe kuEuropean Court?
Vahan akaberekerwa kuArmenia muna April 1983. Muna 1996, iye nevamwe vomumhuri make vakatanga kudzidza Bhaibheri neZvapupu zvaJehovha uye akazobhabhatidzwa ava nemakore 16. Kudzidza kwaaiita Bhaibheri kwakaita kuti aremekedze chaizvo dzidziso dzaJesu Kristu, kusanganisira murayiro waakapa vateveri vake wokuti havafaniri kushandisa zvombo zvehondo. (Mateu 26:52) Pasina nguva abhabhatidzwa, Vahan aifanira kuita chisarudzo chakaoma muupenyu hwake.
Mutemo wokuArmenia unoti mukomana wose anenge asvitsa makore 18 anofanira kuenda kuchiuto. Anenge aramba anotongerwa kugara mujeri kwemakore angasvika matatu. Vahan aida kubatsira vanhu vomunyika yake. Asiwo akanga asingadi kukanganisa hana yake yakadzidziswa neBhaibheri. Saka akaita sei?
Muna 2001, Vahan paakangosvika zera raaitarisirwa kuenda kuchiuto, akatanga kunyora tsamba kuvakuru vakuru vehurumende yeArmenia. Mutsamba idzodzo ainyora kuti kuenda kuchiuto kwaizokanganisa hana yake nezvaaitenda. Asiwo aibvuma kuti aigona hake kuita rimwe basa rehurumende pane kuita rechiuto.
Vahan Bayatyan ari pamberi pejeri rokuArmenia rinonzi Nubarashen
Vahan akapedza rinopfuura gore achingonyorera vakuru vakuru vokuArmenia kuti vabvume chikumbiro chake chokuti asaenda kuchiuto nemhaka yehana yake. Kunyange zvakadaro, muna September 2002, Vahan akasungwa uye akazopomerwa mhosva yokusateerera mutemo wokuenda kuchiuto. Akatongerwa kugara mujeri kwemwedzi 18. Asi muchuchisi haana kugutsikana nemutongo wacho. Papera mwedzi Vahan apiwa mutongo uyu, muchuchisi akakumbira dare rokukwirira nyaya kuti ripe mutongo unopfuura ipapo. Akati zvaitaurwa naVahan zvokuti hana yake uye chitendero chake zvaimurambidza kupinda muchiuto zvaiva “zvisina musoro uye zviine ngozi.” Dare rokukwirira nyaya rakabvuma chikumbiro chomuchuchisi wacho richibva rawedzera mutongo waVahan wokugara mujeri kuti uve mwedzi 30.
Vahan akabva akwidza nyaya yacho kudare repamusoro-soro rokuArmenia. Muna January 2003, dare racho rakatsigira mutongo wedare rokukwirira nyaya. Vahan akabva angoendeswa kunopika mujeri raiva nevanhu vaiva nemhosva dzokuponda, dzokutengesa zvinodhaka uye dzokubata chibharo.
Mafambiro Enyaya Yacho Mudare reEuropean Court
Kubva muna 2001, Armenia yakava nhengo yesangano reCouncil of Europe. Saka zvizvarwa zvokuArmenia zvine kodzero yokukwidza nyaya kudare reEuropean Court of Human Rights (ECHR) kana matare ose omunyika mavo atadza kuitonga zvakanaka. Izvi ndizvo zvakaitwa naVahan. Paakakwidza nyaya yake akataura kuti kusungwa kwaainge aitwa achipomerwa mhosva yokuramba kuenda kuchiuto kwaityora Chikamu 9 chemutemo uri muchibvumirano cheEuropean Convention on Human Rights. Vahan akakumbira kuti kodzero yake yokuramba kuenda kuchiuto nemhaka yehana idzivirirwe pasi pemutemo uyu, kunyange zvazvo paisava neakambobudirira panyaya iyi.
Dare reECHR rakapa mutongo waro musi wa27 October 2009. Richishandisa mutemo wakagadzwa zvichibva panyaya dzakambotongwa, dare racho rakati Chikamu 9 chechibvumirano cheEuropean Convention pachinotaura nezvenyaya yehana, hachidziviriri vanhu vanoramba kuenda kuchiuto vachiti hana dzavo dzinovarambidza.
Bayatyan nemudzimai wake anonzi Tsovinar uye mwanakomana wavo, Vahe
Panguva iyoyo, Vahan akanga atova nenguva yakareba abudiswa mujeri uye akanga aroora atova nemwanakomana. Vahan akaodzwa mwoyo nemutongo wacho. Saka aifanira kusarudza kuti osiyana nenyaya yacho here kana kuti oikwidza kudare guru reECHR rinonzi Grand Chamber. Akasarudza kukwidza nyaya yacho kudare iri. Dare racho haribvumi kutonga nyaya dzose dzose, saka Vahan akafara chaizvo parakasarudza kuongorora nyaya yake.
Dare reGrand Chamber rakazopa mutongo waro muStrasbourg, kuFrance musi wa7 July 2011. Pavatongi 17 vomudare iri, 16 vavo vakabvuma kuti Armenia yakanga yatyora kodzero yehana yaVahan Bayatyan payakamusunga ikamuisa mujeri nokuti akanga aramba kuenda kuchiuto. Mutongi wokuArmenia chete ndiye akavhota achitsigira hurumende yeArmenia.
Bayatyan aine magweta ake mudare reEuropean Court of Human Rights, musi wa24 November 2010
Nei mutongo uyu uchikosha? Nokuti aka ndiko kaiva kekutanga kuti dare reECHR ribvume kuti kodzero yokuramba kuenda kuchiuto nemhaka yehana idzivirirwe zvakazara neChikamu 9 chechibvumirano cheEuropean Convention. Saka dare racho rinoti kana nyika ine utongi hwegutsaruzhinji ikaisa mujeri munhu anenge aramba kuenda kuchiuto nemhaka yehana, inenge yatyora kodzero dzevanhu dzinokosha chaizvo.
Dare racho rakataura mashoko anotevera nezvemaonero eZvapupu zvaJehovha panyaya yokuramba kwavanoita kupinda muchiuto richiti: “Saka Dare rine chokwadi chokuti kuramba kwakaita [Vahan Bayatyan] kupinda muchiuto kwaibva pane zvaanotenda nomwoyo wose izvo zvisingaenderani zvachose nokupinda muchiuto.”
Maonerwo Akaitwa Mutongo Wacho
Mumakore 20 apfuura, hurumende yeArmenia yakavharira mujeri Zvapupu zvaJehovha 450 zvakaramba kupinda muchiuto. Painyorwa nyaya ino, paitova nevakomana 58 vomunyika iyi vakanga vari mujeri nokuti hana dzavo dzakanga dzavarambidza kupinda muchiuto. Vashanu vavo vakaiswa mujeri dare ratopa mutongo waro panyaya yaBayatyan nehurumende yeArmenia. * Mumwe wevakomana ava paakanyorera mumwe muchuchisi achimukumbira kuti vasaenderera mberi nokumusunga nokuti akanga aramba kupinda muchiuto, muchuchisi wacho akaramba chikumbiro chacho. Muchuchisi wacho akapindura mukomana wacho achiti: “Mutongo wakapiwa neEuropean Court panyaya yaBayatyan neArmenia musi wa7 July 2011, haushandi panyaya yako nokuti zviri pachena kuti nyaya dzacho dziri mbiri dzakatosiyana.”
Nei muchuchisi uyu aiva nemaonero akadaro? Pakasungwa Vahan Bayatyan pakanga pasati pava nourongwa hwokuti munhu anenge aramba kuenda kuchiuto aite rimwe basa rehurumende. Hurumende yeArmenia yakati kubva ipapo, pava nemutemo unobvumidza urongwa ihwohwo saka vanenge varamba kupinda muchiuto vanotarisirwa kuita rimwe basa rehurumende. Zvisinei, mutemo wacho uri pasi pemauto saka haushandi kuvanhu vakawanda vari kuramba kupinda muchiuto nemhaka yehana.
Vahan Bayatyan ari kufara chaizvo nemutongo unokosha wakapiwa uchimutsigira. Iye zvino mutongo uyu unomanikidza hurumende yeArmenia kuti irege zvairi kuita zvokusunga uye kuisa mujeri vanhu vanoramba kupinda muchiuto nokuti vanenge vaine zvikonzero zvakasimba zvechitendero chavo.
Zvapupu zvaJehovha hazvina chinangwa chokuchinja mitemo yenyika chero ipi zvayo. Asi sezvakaitwa nemurume wechiduku Vahan Bayatyan, vanoda kuti kodzero dzavo dziremekedzwe pachishandiswa mimwe mitemo yemunyika dzavanogara. Vanozviitirei? Kuti varambe vachigara murunyararo uye kuti vateerere vakasununguka zvavanorayirwa neMutungamiriri wavo Jesu Kristu.
^ ndima 17 Vaviri vacho vakasungwa musi wa7 July 2011, unova zvekare musi wakapiwa mutongo weECHR.